Control ,alt and super key become left shift key - Ubuntu-MM Q&A
Control ,alt and super key become left shift key
windows7နဲ့ Ubuntu 18.04.2 LTS ကို dual boot လုပ်ပြီးတင်ထားပါတယ်..External keyboard ကanitech gaming keyboard သုံးပါတယ်..Windows မှာဆိုဒီပြဿနာ မရှိဘူးခင်ဗျ...Ubuntu မှာ left control right control,left alt right alt,super key နိပ်တိုင်း left shift ကိုပဲ ပြနေပါတယ်..ဒါပေမဲ့ laptop keyboard နဲ့ကျတော့အကောင်း..
keyboard layout နဲ့များပတ်သက်နေမလားဆိုပြီး english(united states),english(us),english(canada) ပြောင်းကြည့်တော့လည်း မရဘူး..
tweaks app မှာ keyboard and mouse/ additional layout options/Alt/Win key behavior /disable ကော ကျန်တဲ့ဟာတွေပြောင်းလည်းမထူးဘူး..
terminal မှာ xmodmap ရိုက်တော့
terminalမှာ xev command ရိုက်ပြီး left right alt,left right control,super key နိပ်တော့လည်း ဒီလိုပဲပေါ်တယ်
asked Apr 10, 2019 in Beginner by sittphonenaing (190 points)
နောက်ဆုံးတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ အကို..
ဒီ Github link ကအတိုင်းလုပ်လိုက်တာ ကောင်းသွားပြီ..
ကျွန်တော်လို beginnerတွေအဆင်ပြေအောင် share ပေးလိုက်ပါတယ်...
answered Apr 20, 2019 by sittphonenaing (190 points)
selected Apr 20, 2019 by sittphonenaing
Keyboard Vendor ဒီဇိုင္း မတူတာပါ။ အလြယ္ေျပာရရင္ hardware မတူတာပါ။
UK Layout တို႔ US Layout တို႔ မတူတာ မဟုတ္ပါဘူး
ခ်ိန္းခ်င္ရင္ config လုပ္ရတာပါ။
မွာ နမူနာ ရိွပါတယ္
answered Apr 10, 2019 by kokoye2007 (7.8k points)
အကိုပေးတဲ့ link က keyboard layout change တဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်..
xinput -list | grep "USB Keyboard" သုံးပြီး keyboard id ယူ..setxkbmap -device 16-layout us ချိန်းကြည့်တာ မြန်မာကီးဘုတ်ပြောင်းရင်တောင် english လိုပဲပေါ်နေလို့ reboot လုပ်လိုက်တယ်..Default setting ပြန်လုပ်လို့ရလား..တရုတ်ကီးဘုတ်ပြောင်းပြီးသုံးလည်း မြန်မာလိုပေါ်နေလို့…
ကျွန်တော့်ရှာကြည့်တော့ CTRL, ALT and SUPER keys binded as SHIFT အဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်..
ဒီလင့်မှာဖတ်ကြည့်တော့ သူလည်းကျွန်တော်လိုဖြစ်တာ...windows မှာအကောင်းlinuxသုံးမှဖြစ်တာ
သူကို comment တစ်ယောက်ပေးထားတယ်
This is notabug. The keyboard chipset usesanon-standard protocol to support n-key rollover. I wroteadriver for it. You can download it from https://bitbucket.org/Swoogan/aziokbd
I wroteablog post about implementing it, ending with:http://swoogan.blogspot.com/2014/09/azio-l70-keyboard-linux-driver.html
တော်တော်များများက သူပြောတဲ့နည်းလုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်….ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တော့ မရတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးဖတ်ကြည့်တော့ သူ driver က Microdia Keyboard Chipset တွေအတွက်ပဲရတာ.. ကျွန့်တော် keyboard ကSiGma Micro Chipset သုံးတာဖြစ်နေတယ်..အဲ့တော့ keyboard packet ကို wireshark တို့ usbmon နဲ့capture ရမယ်တဲ့..driver ကို သူရေးခဲ့သလိုပြန်ရေးရမယ်..https://swoogan.blogspot.com/2014/09/azio-l70-keyboard-linux-driver.html
ကျွန်တော်လည်း ခုမှ ubuntu စသုံးတာဆိုတော့သူလုပ်တာတွေသိပ်နားမလည်ဘူး..ဘာဆက်လုပ်သင့်လည်းခင်ဗျာ..OS က18.04.2-desktop-amd64သုံးတာပါ..
commented Apr 12, 2019 by sittphonenaing (190 points)
It's both bro
You can add my for Burmese. Zg for Zawgyi
I will edit script
commented Apr 12, 2019 by kokoye2007 (7.8k points)
What can I do and how to install ubuntu?
asked May 7, 2020 in Beginner by waiyantunoo (120 points)
Can't access window in grub after Ubuntu update(19.10)(I've tried boot repair and sudo update-grub)
asked Oct 27, 2019 in Beginner by Han Min Myat (120 points)
asked Jun 28, 2020 in Beginner by YanNai (140 points)
Power ဖွင့်တာ ပြန်တက်မလာတာ
how can i enable or disable fn key on 19.04 on dell vostro 14 3468 so that i can use F1 - F12
asked Apr 28, 2019 in Beginner by naungmon (450 points)